Real Sociedad oo iska xaadirisay afar dhammaadka Copa Del Rey markii ay Bernabeu ku garaacday Real Madrid kulan 7 gool la iska dhaliyey – Gool FM
(Madrid) 06 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa tartanka Copa Del Rey looga reebay garoonkeeda Bernabeu kulan 7 gool la iska dhaliyey, iyadoo Real Sociedad ay iska xaadirisay afar dhammaadka tartankan.
Los Blancos ayaa ku hartay wareegga siddeed dhammaadka Copa Del Rey kaddib markii ay guuldarro 4-3 kala kulmeen Real Sociedad, kulan goordhow soo idlaaday.
Waxaa Real Madrid kulankan goolasha ku bilaabay xiddiga ay milkiyaddiisa leedahay M. Ødegaard 22’daqiiqo, inkastoo Ramos uu biraha garaacay haddana kulankan ayaa lagu kala nastay 1-0 looga gacan sarreeyey Los Blancos.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay waxaa labo gool oo deg deg ah la timid kooxda martida ahayd ee Real Sociedad, waxaana u kala dhaliyey Isak 54’daqiiqo iyo Isak 56’daqiiqo, Real Madrid oo mininkeeda joogta ayaana lagu hoggaamiyey 3-0.
Daafaca reer Brazil ee Marcelo ayaa hal gool u soo celiyey kooxda Real Madrid 59’daqiiqo, laakiin waxaa kulanka 4-1 ka dhigay xiddiga Real Sociedad ee Merino 69’daqiiqo.
Real Madrid ayaa labo gool oo xilli dambe ah ka heshay Rodrygo 81’daqiiqo iyo Nacho 90’+3′ daqiiqo, laakiin goolashaas guuldarro kama badbaadin waxaana looga adkaaday 4-3.
Real Sociedad ayaa sidaas tartanka Copa Del Rey uga reebtay Real Madrid, iyadoo kooxda Zidane ay soo dhaafi weysay siddeed dhammaadka, halka Real Sociedad ay iska xaadirisay afar dhammaadka tartankan.
Athletic Club oo gaartay afar dhammaadka Copa Del Rey markii ay Tareenka tartanka ka tuurtay Barcelona... + SAWIRRO